Ny "contact" anao dia "manoratra" fa tsy tonga tampoka ilay hafatra. Inona no tena mitranga? | Vaovao momba ny gadget
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha, rehefa niresaka tamina fifandraisana tamina fandaharam-potoananao ianao tamin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka fanta-daza hitanao, dia azo inoana fa mitranga amin'ny fotoana maro kokoa noho izay tadiavintsika izany, fa tsy amin'ny fotoana fohy. miseho io mari-pamantarana io mampandre anay fa manoratra ny fifandraisana, na dia tonga aza ny fotoana, dia manjavona fa tsy misy hafatra tonga amintsika.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo tondro, araka ny hevitro, ny tsy mitombina indrindra izay azontsika jerena tsara, ankoatry ny zavatra hafa, dia manondro fa ny fifandraisana dia manoratra, mety tsy marina izany hatrizay ny fiasan'izy io dia samy hafa be amin'izay eritreretintsika rehetra. Ho fanampin'izany, ny tondro, araka ny filazan'ny manam-pahaizana, dia iray amin'ireo mety hiteraka ahiahy indrindra amin'ny olona ka, araka ny hevitr'izy ireo, dia tsara kokoa ny manafoana azy io.
1 Ny fiasan'ny mari-pamantarana fa ny fifandraisana dia 'manoratra' dia tena tsy mitovy amin'ny eritreretinay
2 Inona no mitranga amin'ity famantarana ity amin'ny sisa amin'ireo rindranasa izay tsy WhatsApp?
2.1 Inona no mitranga any Hangouts?
2.2 Ahoana no fiasan'ny mari-pamantarana fanoratana ao amin'ny Facebook Messenger?
2.3 Voessage nosedraina
Ny fiasan'ny mari-pamantarana fa ny fifandraisana dia 'manoratra' dia tena tsy mitovy amin'ny eritreretinay
Rehefa manomboka mampiasa ireo rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo isika dia mahatsikaritra ny fiovan'ny toetran'ny mpampiasa raha mifandray na tsia na raha, amin'izao fotoana izao dia mipoitra ilay famantarana fa manoratra zavatra amintsika izy ireo, famantarana izay mety ho tena ilaina raha toa ka tena io no nampino azy rehetra. Amin'ny maha antsipiriany azy dia lazao anao izany ny mari-pamantarana tokana miasa tsara, araka ny fitsapana izay natao tamin'ny sehatra samihafa, dia ny WhatsApp, mitovy izay miseho rehefa manoratra ny fifandraisanao ary manjavona rehefa tsy manao intsony izy.
Ny olana misy amin'ity tondro ity, ary ny antony mahatonga azy io hamorona be loatra fanahiana, izany ve amin'ny ankamaroan'ny fampiharana fandefasan-kafatra dia tsy mandeha amin'ny fotoana tena izy ioRaha lazaina amin'ny teny hafa dia miseho ity tondro ity rehefa mandika ilay rindranasa fa manomboka manoratra ny fifandraisana izay itenenantsika, saingy tsy hanjavona izany rehefa mijanona tsy manandrana ilay fifandraisana, mila miandry hatramin'ny roa minitra raha najanona ny asa soratany. Mitranga amin'ny sehatra tsy mitovy amin'ny Messenger, Hangouts na iMessage izany.
Inona no mitranga amin'ity famantarana ity amin'ny sisa amin'ireo rindranasa izay tsy WhatsApp?
Amin'ireto andalana ireto ihany dia avelako ianao a Video izay anehoan'ny mpampiasa Slate anay ny zavatra tena mitranga amin'ity famantarana ity amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra samihafa. Satria be dia be ny misy, ny tsirairay dia mampihatra an'io fampiasa io amin'ny fomba iray (mahomby kokoa na latsaka) ary ny mpampiasa tsirairay dia mampiasa azy ireo mifanaraka amin'izay mahaliana azy, Slate dia nifantoka tamin'ny fampisehoana ny fomba fiasan'ny mpanondro amin'ny mahazatra indrindra, amin'ny kely indrindra ho azy, toy ny Hangouts, Facebook Messenger na iMessage. Ny fehin-kevitra azony taorian'ny fitsapana azy dia, raha kely indrindra, dia liana liana.
Inona no mitranga any Hangouts?
Amin'ny tranga manokana an'ny Hangouts Isika dia miatrika ny faran'izay mahery indrindra, indrindra satria ny fampiharana, rehefa mijanona tsy manoratra ny interlocutor, dia mety hahatratra maharitra roa minitra hanesorana. Aorian'ireo roa minitra ireo dia tsy hita intsony ilay mari-pamantarana fa tsy miseho intsony na dia mitohy mitohy aza ny fanoratana.
Ahoana no fiasan'ny mari-pamantarana fanoratana ao amin'ny Facebook Messenger?
Angamba ny tranga ny Facebook Messenger ho mahatoky indrindra amin'ny zava-misy. Amin'ity tranga ity dia miseho ny mailaka rehefa manomboka manoratra ny mpampiasa fa maharitra valo segondra vao azo heverina. Fotoana azo ekena kokoa ary tena mitovy amin'ny ampiasain'ny sehatra fandefasan-kafatra hafa toa ny Telegram.
Ary farany, ny fitsapana farany natao dia ny iMessage, rindranasa ho an'ny maro tsy fantatra nefa napetraka tsy misy fampiasa amin'ny finday avo lenta Apple rehetra. Amin'ity tranga ity dia mipoitra tampoka ilay mari-pamantarana fa manoratra ny fifandraisana rehefa manomboka manoratra ny mpiresaka, fa raha mijanona izy mitaky 60 segondra vao hita. Miresaka fanemorana minitra iray isika, ka tsy maninona ny faharetan'ny hafatra na tsia. Amin'ny maha antsipiriany azy, raha mandalo io minitra io dia nanjavona ilay tondro ary miverina amin'ny hafatra ilay fifandraisana dia tsy hiseho intsony ilay mpanondro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ny "contact" anao dia "manoratra" fa tsy tonga tampoka ilay hafatra. Inona no tena mitranga?
Ny Samsung Galaxy Note 9 dia mety hanana mpamaky sidina eo ambanin'ny efijery